Miisaaniyadda gaarka ah ee madaxweyne Deni ugu tala galay gobolka Sool ma horumar ayaa loo adeegsan doonaa mise xoreynta gobolkaas? – Madal Furan
Hoy > Fikradaha > Miisaaniyadda gaarka ah ee madaxweyne Deni ugu tala galay gobolka Sool ma horumar ayaa loo adeegsan doonaa mise xoreynta gobolkaas?
Editor February 19, 2019 February 19, 2019 Fikradaha, Warka 0
Hareysa (Madal Furan) – kadib markii Madaxwaynaha Puntland Siciid Cabdillaahi Deni uu ku baaqay inuu miisaaniyad gaar ah u sameyn doono gobolka Sool, balse waxaa hadalkaas durba jawaab ka soo celiyey maamulka Somaliland.
Wasiirka horumarinta Biyaha maamulka Somaliland Yuusuf Cali Koore oo saxaafada kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa miisaaniyada madaxweynaha Puntland ugu tala galay gobolka Sool ku tilmaamay mid aan wax micne ah sameyn.
Wuxuu kaloo intaas ku daray in xiligii Puntland ay ka talineysay gobolka Sool aysan wax muuqda ka qaban marka la barbar dhigo waxqabadka maamulka Soomaaliland ee gobolkaas.
Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa muujinaya in miisaaniyada madaxweyne Deni ugu talagalay gobolka Sool aysan aheyn mid horumarineed ee ay tahay mid loo qorsheeyey in gobolkaas looga xoreeyo maamulka Somaliland.
Ciidamadda Somaliland ayaa waxay bilowgii sanadkan xoog ku qabsadeen tuuladda Tukaraq oo masaafo 100KM ka yar u jirta magaaladda Garoowe, wuxuuna xukunka la wareegay Mudane Deni iyadoo ay weli taagan tahay raad xumadii uu maamulka Puntland ugaga tegay Madaxweynihii hore Dr. Gaas.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan (Karaash) oo ciidamo daacad u ahi ay gacanta ku hayeen tuuladda Tukaraq ayaa waxaa ka fara maroojiyey ciidamada Somaliland, xiligaas Mudane Karaash wuxuu Wasiirka Arrimaha Gudaha ka ahaa xukuumadii Dr. C/weli Maxmed Cali Gaas.
Xiligan uu Axmed Karaash noqday Madaxweyne ku xigeen ayaa la filayaa inuu isagu maamuli doono miisaaniyada loogu tala galay gobolkaas, arrintaasina ay fududeyn doonto in maamulka cusub ee Puntland uu awood u yeesho inuu gudaha deegaamada maamulka Somaliland gacanta ku hayo oo ay ka mid tahay magaaladda Laascaanood laga abuuri doono maleeshiyaad ka dhex dagaalama gudaha gobolka Sool si ay u fududaato in gacanta maamulka Puntland dib loogu soo celiyo deegaamada gobolka Soo loo 90% ay iminka Somaliland ka taliso.
Gobolka Sool ayaa siyaasiyiinta ka soo jeeda waxay xilal ka hayaan Labadaa maamul ee Somaliland iyo Puntland, waa taas arrinta dhalisay in gobolka Sool uu ka degi la’yahay khilaafka siyaasadeed ee maamulada Punland iyo Soomaaliland sababa inay ku herdemaan lahaashaha gobolkaas.
Golaha Shacabka Puntlad oo maanta dooranaya Guddoonk Baarlamaanka
Hay’ada Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty oo soo dhoweysay xariga Wasiirka Amniga Jubbaland